Hawaasni Oromoo Magaalaa Meelboorni, Awustraliyaa Guyyaa Goototaa Sirna Ho”aan Kabajan -
Guyyaan goototaa gaafa 09/04/216 sa’a 2:30 irraa eegalee bakka qondaalonni ABO, miseensonni ABO fi hawaasni Oromoo magaalaa Meelboorni argametti sirni hoo’aan kabajamee ooleera.
Jaal Toofiiq Usmaaan abbaan jaarmayaa KABO Viik sagantaa jiru tartiibaan erga beeksisanii booda sirni kabaja guyyaa goototaa eebba manguddootaan eegalameera.
Itti fufuun faaruu alaabaa fi yaadannoon sammuu goototaaf eerga taasifamee booda kabaja gootota wareegamaniif dungoon ijoollee ol-guddattuun ibsameera.
Jaal Abdataa Hoomaa dura taa’aan konyaa ABO Viiktooriyaa baga nagaa dhuftan jechuun barbaachisumma kabaja guyyaa kanaa irratti ibsa gabaabaa tasisaniiru.
Itti aansuudhaan jaal Gaashuu Lammeessaa miseensi gumii sabaa fi gaafatamaan birkii SJ-ABO DDSJ waa’ee guyyaa goototaa fi haala yeroo irratti ibsa bal’aa tasisaniiru.
Dhimma qabsoo Oromoo irratti marii akkasumas gaaffii fi deebiin erga taasifame booda calbaasiin galii WBOtiif oolu tasifameera. Dhuma irratti ibsi ejjennoo aarmaan baasuudhaan akkasumas waamicha qaama qabsoon Oromoo ilallatu hundaaf tasisuun sagantichi xumurameera.
Gochaa motummaan “TPLF” duguuggaa sanyii uummata Oromoo irraan gahaa jiru ni balaaleffanna.
Qabssoo xumura garbummaa qeerroon bilisummaa gaggeessaa jiru cinaa ni dhaabanna.
Qabssoo walii gala uummata Oromootiin gaggeeffamu jabinaan galmaan gahuuf murannoodhaan waan nurraa eegamu hundaa ni kaffalla.
Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) hirroomsuudhaaf qabeenyyaa fi dandeettii qabnuun cinaa ni dhaabbanna.
DHDUO (“OPDO”) fi Oromootni meeshaa diinaa ta’uudhaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiran biyyaa isaanii saamanii kan isaan iraa hafe hormmatii gurgurataa jiran iti gaafatamummaa seenaa fi seeraa jalaa akka hin bane hubattanii hirmmanna yakka uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana iraa akka dhaabbattan waamicha lamummaa isinif goona.
Ilimmaan Oromoo harka wal qabachudhaan falmii godhaa jirtan hpjii boonsa hojjechaa jirtu, ammallee hanga xumura garbummaatti jabinaan itti fufuu fi wal gorfachuudhaan golga waliif taatanii motummaa nama nyaata kana of irraa buusuu iratti gamtta jiru tifkadha.
Hayyootni Oromoo biya adda addaa jirtan qabsoo hadhaawaa uummatni Oromoo gaggeessaa jiru kana akka hayyuu sabaa tokkootti waan dandeessaniin bira dhaabachuun dirqama lammummaati.
Oromootnni qabsoo Oromoo keessatti jajjabinni mullachuu isaa argan,humna qabsaa’otaa jajjabessu otoo irraa egamuu, maqaa adda addaa ofitti moggaasuudhaan qabssoo Oromootti gufuu ta’an gamtaa qabsaa’otaa dadhabsiisuuf halkanii fi guyyaa kaatan gochaa kana irraa akka of qusatani waamicha lammummaa goonaaf .
WBO jabeesssuudhaaf kan humna qabnu humnnan, kan beekumsa qabnu beekumsaan, kan qabeenya qabnu qabenyaan yeroon itti jajjabeessinu ammaa waanta’eef waan qabnuun akka maddii dhaabannu waamicha Oromummaa isiniif goona.